Nexus 5, 6, 7,9နှင့် Nexus Player တို့သည် Android 6.0 ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည် Androidsis
၎င်းတို့သည် Nexus ဖြစ်ပြီး Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်
Alfonso က de Frutos | | ကို Nexus, Android ဗားရှင်း
ဒါဟာပွင့်လင်းလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည် ဂူးဂဲလ်က Nexus မော်ဒယ်လ် ၂ ခုကိုတင်မယ် သို့သော်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးကကမ္ဘာကြီးကိုပြသခဲ့သည် Nexus 6P Huawei နှင့်၎င်းမှထုတ်လုပ်သည် Nexus 5X LG မှဤကိစ္စတွင်။ အခုတော့ Android 6.0 အကြောင်းပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။
ပြီးတော့ဂူးဂဲလ်လည်းကြေညာခဲ့တာပါ Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Nexus ဆိပ်ကမ်းများ။ သတင်းဆိုးများထွက်လာသည်မှာ Nexus4သည်နောက်ဆုံးပေါ် Google ၏ operating system ကိုတရားဝင်လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Nexus 5, 6, 7,9နှင့် Nexus Player တို့သည် Android 6.0 ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
Android 6.0 Marshmallow ၏တင်ဆက်မှုအရ Google သည် N ကိုနှစ်မျိုးလုံးအတည်ပြုခဲ့သည်Exus 5, 6,7(2013)9နှင့် Nexus Player တို့သည်လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်း Android 6.0 ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Mountain View မှယောက်ျားများသည်လာမည့်အောက်တိုဘာ ၅ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ မှစတင်၍ အသစ်ထွက်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းစာရင်းရှိ Nexus ဖုန်းများအားလုံးကိုနှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်မွမ်းမံနိုင်သည်။ နှင့် Nexus 4?
ကောင်းပြီ ဂူဂဲလ်က၎င်းကိုသေလွန်သူအားပေးပြီးဖြစ်သည် ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းများကို ၁၈ လကြာအောင် update လုပ်သည့်မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီသည်မှန်သော်လည်း၎င်းစက်သည်ဂူးဂဲလ်မှလည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမရရှိနိုင်သည့်အတွက်အလွန်စိတ်ပျက်မိသည်။
Nexus4သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ဖုန်းဖြစ်သည် မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲ Android 6.0 M ကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်များပါရှိသည်။ နောင်အနာဂတ်တွင် Nexus4အတွက် update ကိုစတင်ခြင်းဖြင့် Google သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေမလားစောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤခမ်းနားကြီးကျယ်သောဖုန်းရှိသူများသည်ဂူဂဲလ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသောပထမ ဦး ဆုံးချက်ပြုတ်ထားသော ROMs ကိုစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့ပါသည်။ ရောက်ရှိရန် operating system ကို။
တကယ့်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ကျနော့်အမြင်တွင် ထောင်နှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများကိုစွန့်ခွာရန် Google အမှားတစ်ခု ငွေရေးကြေးရေးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိသောကြောင့်တယ်လီဖုန်းဈေးကွက်တွင်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်မှတ်သားထားသောထိုကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။
ငါနားလည်နိုင်တာကဖောက်သည်တွေကို Nexus ဖုန်းအသစ်တွေ ၀ ယ်ဖို့တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ်နားလည်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်နေတုန်းပဲ သူတို့က Nexus4ကို Android 6.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပေးရမည်ဖြစ်သည်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? Nexus4သည် Android 6.0 M သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုလက်ခံသင့်သည်ဟုသင်ထင်သလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ကို Nexus » ၎င်းတို့သည် Nexus ဖြစ်ပြီး Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင် NEXUS4ကိုမွမ်းမံသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Lollipop ကိုမွမ်းမံမှုများသည်ဆိပ်ကမ်းများတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းထက်ပိုဆိုးစေတယ်လို့စဉ်းစားသင့်တယ်။ ငါ့မှာပထမမျိုးဆက် NEXUS7လည်းရှိတယ်၊ ငါအဲဒါကိုလုံးဝဖယ်ထုတ်လို့မရတဲ့အတွက်ပြန်ဖြုတ်ပြီး KitKat ကိုပြန်သွားရတယ်။ ၎င်းသည်မတန်တဆစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် Android poop ဖြစ်သည်။
ငါ့မှာ 4GB Nexus 16 ရှိတယ်။ အချိန်ကကြာလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Google ကအရင်စျေးနှုန်းကိုပြန်မသွားရင်နောက်တစ်ခုကိုထပ်မဝယ်တော့ဘူး။ ဂူဂဲလ်ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဒီနေ့ရှိနေတာကြောင့်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိမှာပါ။ XIAOMI MI5 ကိုလွှတ်တင်သည့်အချိန်တွင် Nexus ရောင်းအားသည်ပြီးဆုံးသွားသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ
Huawei Nexus 6P ကိုတရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်